Sixitaanka dhibaatada bateriga ee AirPods Max oo leh qalabka 3C39 waa la xaqiijiyay | Waxaan ka socdaa mac
Sixitaanka dhibaatada batteriga ee AirPods Max oo leh qalabka 3C39 waa la xaqiijiyay
Toddobaadkan Apple waxay soo saartay cusbooneysiin firmware ah oo cusub oo qaali ah AirPods Max si loo xaliyo dhibaatada batteriga ee saameysay ismaamulka qalabka. Waxay u muuqataa in lagu keydinayo Kiiskaaga Smart, batteriga si dhakhso leh ayuu u daatay. Maxaa dhar ah.
Nasiib wanaag, dhibaatada ayaa la ogaaday oo shirkaddu ay awood u yeelatay inay ku xalliso iyada oo loo marayo software, sii deynta cusbooneysiin cusub. Marka haddii aad ka mid tahay isticmaaleyaasha mudnaanta leh ee AirPods Max, si xor ah u cusbooneysii sida ugu dhakhsaha badan ee aad awooddo.
Maalmo yar ka hor waan faallay in Apple ay soo saartay nooc cusub oo ka mid ah qalabka loo yaqaan 'AirPods Max'. Waxaa la tuhunsanaa inay xallin karto dhibaato jirta taas oo sababtay in samaacadaha dhagaha ay si dhaqso leh u lumiyaan nolosha batteriga markii lagu keydiyo Kiis Caqli badan. Hadda waxaa horeyba loo xaqiijiyey inay arintu sidan tahay.
AirPods Max waxaa ku jira Kiis Smart ah oo loogu talagalay in lagu meeleeyo hab hurdo ah si loo ilaaliyo nolosha batteriga marka aan la isticmaalin. Fikradda ayaa ah inaad adigu ku dhejiso Kiiska Smart-ka isla markaana ay isla markiiba galaan a hab awood hooseeya, ka dibna qaab awood aad u hooseeya leh ka dib 18 saacadood ka dib.
Si kastaba ha noqotee, tan iyo markii AirPods Max dhegaha la sii daayay bishii Diseembar, isticmaaleyaal badan ayaa ka cawday batteriga laga soo saaray 100% ilaa 1% ama 0%. Laga bilaabo habeenxitaa markii looga tago gudaha Kiiska Smart.
Nooca cusub ee firmware-ka ah waa 3C39
Isticmaalka batari AirPods Max ee Kiiska Smart ka hor iyo kadib cusbooneysiintii ugu dambeysay ee qalabka casriga ah. Waxaan u maleynayaa inay hagaajiyeen. pic.twitter.com/upFLBw85Oq
- Guilherme Rambo (@_inside) March 12, 2021
Imtixaanada ay daabaceen Guillerme rambo koontadaada Twitter muuji farqi weyn oo ku saabsan isticmaalka batteriga bilaa camalka ah ee AirPods Max markii uu ku jiray Smart Case kadib markii la cusbooneysiiyey nooca firmware ee 3C39.
Kadib markuu sameeyay dhowr tijaabo, wuxuu hubiyaa in AirPods Max lumi batteriga aad u yar markay ku jiraan Kiiska casriga ah ee qalabka cusub. Qashinka batteriga ayaa ahaa mid aad u kacsan ka hor cusbooneysiinta wiiggan.
Nooca cusub ayaa sidoo kale hagaajinaya arrin kale oo iswaafajin ah macruufka 14.5. Waxay hagaajineysaa arrin meesha AirPods Max ay ku dhici lahayd wax yar ka dib markii lagu xiray iPhone oo shaqeynaya iOS 14.5. AirPods Max si otomaatig ah ayuu u cusbooneysiiyaa markii uu ku xiran yahay korontada iyo meel u dhow iPhone-kaaga.
Si aad u hubiso nooca qalabkaaga ee AirPods:
Fur arjiga «goobaha»Taleefankaaga iPhone-ka.
Soo gal liiska «Bluetooth«
Ka hel AirPods Max-gaaga liiska qalabka
Ciyaar "i"iyaga oo leh
Eeg tirada «Nooca Firmware»
Nooca ugu dambeeyay ee qalabka 'AirPods Max firmware' waa 3C39. Haddii tani ay tahay waxa aad ku aragto barnaamijka Settings, waxay ka dhigan tahay in AirPods Max-kaaga uu gabi ahaanba la socdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Sixitaanka dhibaatada batteriga ee AirPods Max oo leh qalabka 3C39 waa la xaqiijiyay